आज चन्द्रग्रहण लाग्दै : तपाईको राशी कुन ? जान्नुस् के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन
Monday,7Aug, 2017 10:12 AM
२३ साउन, काठमाडौं । आज यो वर्षको पहिलो चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । नेपालमा सोमबार राति ११ बजेर ७ मिनेटमा सुरु हुने चन्द्रग्रहण राति एक बजेर चार मिनेटमा सकिने छ ।
यो चन्द्रग्रहण नेपालसहित दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशमा तथा अष्ट्रेलिया, अफ्रिका र सम्पूर्ण यूरोपबाट देख्न सकिने बताइएको छ । चन्द्रग्रहण राति ११ बजेर ७ मिनेटमा सुरु भए पनि दिउँसो २ बजेदेखि नै कुनै पनि भोजन गर्न नहुने पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ । तर, बालक, जेष्ठ नागरिक र बिरामीलाई भने भोजन खान हुने समितिको भनाई छ ।
ग्रहण लाग्दा के गर्नु हुन्छ, के गर्न हुँदैन ?
चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहणमा पूजापाठ गरी दान गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता छ । तर, चन्द्रग्रहण लागेको बेला मांगलिक कार्य गर्नु नहुने बताइन्छ । चन्द्रग्रहणमा गरेको मांगलिक कार्यबाट फल प्राप्त नहुने धार्मिक विश्वास छ । त्यसैले आज परेको जनैपूर्णिमा यही साउन १३ गते नागपञ्चमीकै दिन मनाइसकिएको छ । ग्रहणको बेला घरभित्रै बसेको राम्रो मानिन्छ । किनकी ग्रहणको बेला हानिकारक प्रकाशले असर गर्ने खगोल बैज्ञानिकहरु बताउँछन् । यसैगरी फूल टिप्न, कपाल काट्न, नुहाउन, कपडा धुन, ब्रस गर्न, दूध दुहुन र सुत्न नहुने मान्यता छ ।
ज्योतिष विष्णु भट्टराइका अनुसार चन्द्र ग्रहण लागेका बेला यी राशीमा यस्तो प्रभाव पर्छ
मेषः मेष राशिका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्यमा असर पार्ने भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
वृषः वृष राशिका व्यक्तिहरुमा पारिवारिक समस्या आउन सक्छ ।
मिथुनः मिथुन राशिका व्यक्तिहरुलाई चन्द्रग्रहणबाट साथीहरुको सम्बन्धबाट सुख र सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
कर्कटः कर्कट राशीका व्यक्तिहरुलाई आजको चन्द्रग्रहण शुभ मानिएको छैन । जीवनसाथीलाई कष्ट हुने योग छ । अनावश्यक खर्च र मानसिक तनावको योग छ ।
सिंहः सिंह राशी भएका व्यक्तिहरुलाई पनि स्वास्थ समस्या देखा पर्न सक्छ ।
कन्याः कन्या राशी भएका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक समस्या पर्न सक्छ ।
तुलाः तुला राशी भएकाहरुलाई आजको चन्द्रग्रहण शुभ छ । आज धेरै खुसी प्राप्त हुनेछ ।
वृश्चिकः वृश्चिक राशी भइकाहरुलाई आर्थिक स्रोत जुट्ने योग छ ।
धनुः धनु राशी भएकाहरुलाई धन हानी हुने योग छ । त्यसैले आज पैसाको लेनदेन नगरेकै राम्रो ।
मकरः मकर राशीलाई राम्रो छैन । दुर्घटना हुनसक्ने योग भएकाले सजग लहुनुहोला
कुम्भः कुम्भ राशी भएकाहरुलाई धन सम्बन्धी मामिलामा सावधानी अपनाउनुपर्ने छ । धन नष्ट हुने योग छ ।
मीनः मीन राशी भएकाहरुलाई आजको चन्द्रग्रहण मध्यम छ । तर, धन सम्बन्धी कारोबार नगरेकै राम्रो ।